Nana Blu indlu yonke
I-Nana Blu iyigugu le-calabrian leminyaka eyi-1000 elisanda kulungiswa. Yakhelwe kabusha ngo-2021 namuhla iyindlu ethandekayo enezitezi ezi-2 kanye nethala elinombono omangalisayo emagqumeni aseCalabrian kanye noLwandle i-Ionian. INana Blu inegumbi lokulala eliphindwe kabili elinegumbi lokugezela (phansi) kanye nekhishi elihlome ngokuphelele kanye negumbi lokuhlala esitezi sokuqala esinombhede ogoqekile osofa. Ithala elingaphezulu ligcwaliswa ngetafula le-ceramic lakudala.
Sicela uqaphele ukuthi uqasha indlu esikhungweni somlando senkathi ephakathi yedolobhana. Ngo-1983, leli dolobha lahlaselwa imililo yehlathi futhi lacishe lacekelwa phansi laphela. Izindlu eziningi ezizungezile azikakhiwa kabusha, kodwa eminyakeni embalwa edlule izakhamuzi seziqalile ukulungisa nokwakha kabusha le ndawo ukuze ibuyise ubukhazikhazi bayo basekuqaleni.